Hari Prasad Bhandari | Nepali Stories
Hari Prasad Bhandari – Sanjog
हरिप्रसाद भण्डारी – संजोग
म ब्यूँझदा मैले आफूलाई अस्पतालको बेडमा पाएँ । अचम्म लाग्यो मलाई । म किन र कसरी त्यहाँ पुगेँ भन्ने कुरा मेरा दिमागले ठम्याउन सकिरहेको थिएन ।
त्यसबेला मेरो सारा शरीर दुखिरहेको थियो । टाउको गह्रौं भइरहेको थियो । र, आँखा अगाडिको दृश्य धमिलो देखिन्थ्यो ।
एकैछिनपछि अस्पतालको कारुणिक वातावरणलाई चिर्दै एउटी परिचारिका मेरा नजिक आइन् । मतिर हेरेर मुसुक्क मुस्कुराइन् । ‘कस्तो छ अहिले ?’ यसो भन्दै हसिलो अनुहार बनाएर मलाई हेरिरहिन् । उनी मसँग केही बोल्न खोज्दै थिइन्, तर म केही बोलिन । म नबोलेको देखेपछि उनले नै मलाई सान्त्वना दिँदै ‘अब आत्तिनु पर्दैन, छिटै निको हुन्छ’ भन्दै एउटा इन्जेक्सन् ल्याएर पाखुरामा लगाइदिइन् र बिस्तारै मल्न लागिन् ।
“मलाई किन यहाँ ल्याएको सिष्टर ?” एकैछिनपछि सासैसासमा मेरो मुखबाट आवाज आयो । मैले सिष्टर भनेको सुनेपछि उनी झस्किन् । अचम्म मानिन् र भनिन्— “हिजो तपाईं चढ्नुभएको गाडी दुर्घटना भएको के त ।” त्यसपछि पनि उनले मेरो अनुहारमा झुकेर हेर्दै थिइन् । तर मैले टाउको दुखेको हुनाले आँखा चिम्लेर कुनापट्टि फर्किएँ ।
तीन÷चार दिनपछि म पहिलेको अपेक्षा धेरै स्वस्थ भइसकेको थिएँ तर पुर्ण आरामचाहिँ भएको थिएन । त्यस अवधिमा ती परिचारिकाले मेरो खुब सेवा गरिन् । उनले गरेको मप्रतिको सेवाभावले मलाई साह्रै फाइदा पु¥यायो । उनले मलाई असाध्यै माया गर्थिन । मीठो बोल्थिन्, मुसुक्क हाँस्थिन् र मलाई खुसी पार्न प्रयत्न गर्थिन् । उनको बोली र व्यवहारमा सन्जीवनी मिसिएको प्रतीत हुन्थ्यो मलाई । उनी समय समयमा म भएका ठाउँमा आउँथिन्, नौला नौला औषधि र फलफूल ल्याएर खुवाउँथिन् र मसँग केही न केही कुरा गर्न चाहन्थिन् । मेरो शरीर स्वस्थ हुँदै थियो तापनि बोल्दा टाउको अझै दुख्थ्यो । त्यसैले उनले गरेका कुराहरूको जवाफ फर्काउन सकिरहेको थिइन ।
होसमा आएको चौथो दिन मैले उनलाई त्यत्तिकै प्रश्न गरेको थिएँ— “सिष्टर, कोही मलाई भेट्न त आएन ?”
“अहँ आएन त !” आश्चर्य मान्दै उनले भनिन् ।
“कोही भए पो आउनु !” मैले मनमनै भनेँ । अनायास मेरो मुखबाट लामो सास बाहिर आयो ।
“तपाईं किन आउनुभएको काठमाडौं ? यतै बस्नुहुन्छ कि . . .।” यस्तैमा एकदिन उनले सोधेकी थिईन् ।
“बस्दिन, सानो काम थियो त्यसैले आएको थिएँ ।”
“घर कहाँ पर्छ ? र के काम गर्दै हुनुहुन्छ नि आजकल ?” उनले माथि सिलिङ्तिर हेर्दै थप जिज्ञासा राखिन् ।
“खोई….! घरको त कुनै ठेगानै छैन । काम भने यसो क्याम्पसमा पढाउने गरेको छु ।”
“तपाईंको पूर्ण परिचय मागेको छ । परिवारको नाम र ठेगाना दिनोस् । खबर पठाउनु पर्छ हामीले ।” उनले भनिन् ।
“त्यो दुःख गर्नु पर्दैन ।”
“किन र ? दुःख होइन, त्यो त हाम्रो कर्तव्य पो त ।”
म त्यो बेला केही बोल्न चाहेको थिइनँ, उनले निकै जिद्दी गरिन् ।
“मेरो जीवनप्रति चासो राख्ने व्यक्ति कोही पनि छैन । बरु एउटा सानो खबर मेरो क्याम्पसको नाममा पठाइदिनु भए हुन्छ ।’ मैले यसो भनेर उनको मन राखिदिएँ ।
मेरो कुरा सुनेपछि उनले अचम्म मानिन्, ट्वाल्ल परेर मेरा अनुहारमा हेरिन् र बिस्तारै भनिन्— “के तपाईंको परवार छैन र ?”
“छैन ।” लामो सास लिदैँ सत्य कुरा सुनाएँ । यसपछि उनी केही बोलिनन् । आश्चर्य मान्दै त्यहाँबाट हिडिन् ।
अस्पतालबाट बिदा लिने दिन नजिक आइरहेको थियो । त्यस अवधिमा उनीबाट मैले कहिल्यै तिर्न नसक्ने अमूल्य सहयोगको पाएको थिएँ । उनले मानवीय सहयोग मात्र होईन आर्थिक सहयोगसमेत गरेको आभाष पाएको थिएँ मैले । त्यसैले एकदिन यिनै कुरा बारे जिज्ञासा राखें ।
उनी मधुरो र मलिन हाँसो हासिन् । अनि त्यस्तो कुनै खर्च नभएको भाव व्यक्त गरिन् ।
“मानवीय सेवा जे जस्तो भए पनि अन्य खर्चको भार त पार्नु भएन नि तपाईमाथि । फेरि यो सबै थोक दिने अस्पताल पनि त होइन यो ।” मैले आफ्नो कुरो अगाडि राखेँ ।
“तपाईंको लागि आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण खर्च हामीलाई अन्यत्रबाटै प्राप्त भइसकेको छ ……..।” मुुसुक्क हाँस्दै उनले भनिन् ।
“अन्यत्रबाटै रे ? को सँगबाट ?” मलाई आश्चर्य लाग्यो र जोड दिँदै सोधेँ— “कतै तपाई झूठो त बोलिरहनु भएको छैन ? कतै मजाक पो गर्नुभएको हो कि ?”
“हैन हैन, मैले किन झूठो बोल्नु, किन मजाक गर्नु ?” उनी केही क्षण रोकिइन् र अगाडि थपिन्— “पहिलो दिन तपाईलाई चाहिने रगतसमेत हामीलाई अन्यत्रबाटै प्राप्त भएको थियो ।”
“रगत पनि !”
उनी मुसुक्क हाँसिन् र भनिन्— “साँच्चै भन्ने हो भने त्यो सहयोगी वा दाता नपाउनुभएको भए तपाईको बाँच्ने सम्भावना न्यून थियो । निकै कोशिस गरेर बचाएको हो तपाईलाई । भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न कुन्नि ? यस मानेमा तपाई निकै भाग्यमानी हुनुहुँदोरहेछ ।”
उनको कुरा अनौठो लागिरहेको थियो मलाई । आश्चर्य मान्दै मैले बिस्तारै सोधेँ— “अन्यत्रबाट भन्नु भयो ! तर को हुन सक्छ मलाई बाहिरबाट मद्दत गर्ने त्यस्तो व्यक्ति ?”
निकैबेर घोरिएपछि उनले भनिन्— “शीलाको नाम सुन्नु भएको छ कतै ?”
“शीला ?” उनको कुरा सुनेर म झसङ्ग भएँ ।
“उनीबाटै प्राप्त भएको हो यो सबै सहयोग ।” उनले सहज रुपमा भनिन् ।
“शीला !, उही शीला जसलाई मैले चाहेर पनि पाउन सकिनँ ।” मैले लामो सास फेरंँ र म करीव सत्र÷अठार वर्ष पुरानो अतितमा डुबुल्की मार्न पुगेँ ।
करीव सत्र वर्ष पहिले शीलाले र मैले राम्रा र सुखका सपना देखेका थियौँ । हाम्रो सपनाको संसार औधी सुन्दर र मनमोहक थियो । हामीले एउटा आदर्श पारिवारिक जीवन बिताउन चाहेका थियौँ । तर सपना सपनामै सीमित रह्यो । हामीले सपनाका खुसीहरूलाई विपनामा अनुवाद गर्न सकेनौँ । समयको छालले उनको र मेरो क्षणिक मिलन बनायो, सुनौला सपना देखायो र केही समयपछि अलग्यायो । हामी टाढा टाढा हुँदै गयौँ र हरायौँ एक आपसमा ।
क्याम्पस पढ्ने क्रममा उनको र मेरो पहिलो भेट भएको थियो । संजोगबस उनको र मेरो परिचयले गाढा रूप लिँदै गयो । अनि छोटो समयमै हामी बीचमा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध जोडिदै गयो ।
पहिले हामीले पढ्ने विषय अर्कै थियो । पछि मैले उनलाई चिकित्साशास्त्र पढ्ने सल्लाह र हौसला दिएको थिएँ । उनले त्यसै गरेकी थिइन् ।
हामीहरू आत्मीय रूपमै प्रेममा बाधिएका थियौँ । हाम्रो प्रेम पवित्र थियो । हामीले हामी बीच रहेको पवित्र प्रेमलाई बैवाहिक रूपमा परिणत गरी जीवनभरि अमर राख्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । सो कुरा उनको घरसम्म पु¥यायौँ । हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार हुनेछ भन्ने लागेको थियो हामीलाई तर हाम्रो अनुमान सत्य ठहरिएन । हामीले जतिसुकै पवित्र प्रेम गरेका भए पनि हाम्रो संस्कारले हाम्रा बीचमा भाँजो हाल्यो । हाम्रो चाहना पुरा हुनुको साटो उल्टै हाम्रो पवित्र प्रेमलाई नकारात्मक दृष्टिले हेरियो । हामीले परिस्थितिका बिरुद्ध संघर्ष गर्नु पथ्र्यो तर गरेनौँ, सकेनौँ शायद । परिवेश अहिलेको भन्दा केही फरक भएर पनि हो कि !
पछि शीलाको विवाह अन्तै हुने हल्ला चल्यो । यद्यपि शीलाले उनीहरूको प्रस्तावको विरोध त गरिन्, तथापि सामाजिक बन्धनलाई तोडेर सिधै मसँग सम्वन्ध जोड्ने आँट भने गर्न सकिनन् । उनको परिवारबाट हाम्रो सम्वन्ध र सम्पर्कलाई टाडा राख्ने प्रयत्न गरियो । हामी चाहरे पनि एक अर्काका हुन सकेनौँ ।
हाम्रो सम्पर्क टाडा टाडा हुँदै गयो । उनले मलाई बिर्सिन् । उनले बिर्से पनि मैले भने कसैगरे पनि उनलाई बिर्सन सकिन । उनलाई प्राप्त गर्ने मेरा चाहनाहरूलाई उनको तस्वीरमा सीमित राखेर जीवन बिताउने प्रण गरेँ । आज धेरै वर्षपछि एक्कासि उनको नाम र उनले मप्रति गरेको सेवा भावको कुरा सुन्दा निको भइसकेको घाउमा दाउराले घोँचेजस्तै लाग्यो । म भावविह्वल बनेर शून्यमा टोलाइरहेँ ।
मलाई उनको सम्झनाले रातभरि सतायो । अर्को दिन विहान म अस्पतालबाट हिँड्ने भएँ । हिँड्नुपूर्व शीलाको बारेमा सम्पूर्ण कुरा बुझ्न चाहन्थे, तर म हिँड्ने बेलामा निज परिचारिकालाई भेट्न सकिनँ । सोधेको कुन्नि के जरुरी काम परेर उनी विदामा छन् भन्ने खबर पाएँ । भेट्न नपाएकोमा नजाती लाग्यो । पछि आएर भेट्ने र यिनैको माध्मद्धारा शीलाको सम्पर्क पत्तालगाउने विचार लिएर त्यहाँबाट हिड्ने निधो गरेँ ।
वासस्थानमा पुगेको केही दिनपछि हुलाकीले आएर मेरो नामको एउटा पत्र दियो । पत्र शीलाले नै लेखेकी रहिछन् । मलाई आश्चर्य लाग्यो र छिटो छिटो पत्र खोलेर पढ्न सुरु गरेँ ।
प्यारा विनोद !,
धेरै वर्षपछि तिमीलाई भेटे र सेवा गर्ने अवसर पाएँ । अत्यन्तै खुसी लाग्यो । तिमीले मलाई नचिनेकोमा सुरुमा त दुःख लागेको थियो तर पछि उक्त दुःखलाई तिम्रो प्रगतिसँग साटेर मन बुझाएँ । चाहे जे होस्, तिम्रो प्राण बचाउन पाएकोमा मैले आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छु । तिम्रो सल्लाह र सहयोगले गर्दा आज हजारौँ दुःखी गरिबहरूको सेवा गर्ने अवसर पाएकी छु । तिमी र म जति टाडा भए मनि तिम्रो सम्झना हराएको छैन मनबाट । बिदाइमा भेट्न नआएकोमा दुःख त अवश्य लाग्यो होला, तर पीर नमान्नु । जिन्दगी रहेसम्म एक आपसमा भेट हुँदोरहेछ, अचम्मको भेट भयो ।
शरीरको ख्याल गर्नु र पत्र पठाउनु ल ? मनका सम्पर्ण भावनाहरूलाई दुई थोपा मसीको सहाराले कागजमा कोरेर सकिदैनन् । त्यसैले अहिलेलाई कलम यहीँ रोक्छु, बाँकी गन्थन भेटमै गरौँला ।
उही तिमीलाई सधैँभरि माया गर्ने
पत्र पढेपछि एकपटक निद्राबाट ब्यूँझेजस्तो लाग्यो । त्यसपछि चिठी समाएका मेरा हातहरू थरथर काँप्न थाले । अनायास आँखाहरू पारि क्षितिजतिर दौडिए, जहाँ सधैँ सेता देखिने हिमालहरू बेलुकीको सुर्यको प्रकाशले गर्दा सुनौलो रङमा चम्किरहेका थिए ।
Posted in Hari Prasad Bhandari
Tagged Hari Prasad Bhandari - Sanjog Hari Prasad Bhandari's Nepali Story Sanjog Literary work of Nepali Story Writer Hari Prasad Bhandari Literatures of Nepali Story Writer Hari Prasad Bhandari Nepali Author Hari Prasad Bhandari Nepali Katha Nepali Katha Sanjog by Hari Prasad Bhandari Nepali Kathakar Nepali Kathakar Hari Prasad Bhandari Nepali Rachanakar Kathakar Hari Prasad Bhandari Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Hari Prasad Bhandari Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Hari Prasad Bhandari Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Sanjog by Hari Prasad Bhandari Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Hari Prasad Bhandari Sahityakar Hari Prasad Bhandari Ka Nepali Katha Haru